Pyae Phyo (MMiTD): ♪ " V7+ မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Face access လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ . . . ? " ♫
♪ " V7+ မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Face access လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ . . . ? " ♫
ဈေးကွက်ထဲမှာ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ V7+ ဟာ မျက်နှာပြင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပြီး အရှေ့ကင်မရာ အရည်အသွေးကလည်း ပိုကောင်းလာပါတယ်။ အရှေ့ကင်မရာနဲ့ မျက်နှာပြင်အကြောင်းက အထူးတလည် ရေပန်းစားနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေမယ့် V7+ ရဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Face access ကလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် တစ်ခုပါ။ Face access ဟာ Unbox လုပ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းတန်းပြီး အသုံးပြုလို့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ သူ့ကိုအသုံးပြုဖို့ System update ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ system update လုပ်ပြီးရင်တော့ Face access လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Face access ပြုလုပ်ဖို့ နည်းလမ်းလေးကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
အဆင့် ၁ အနေနဲ့ အရင်ဦးဆုံး setting ထဲကို သွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Fingerprint, face and password ကို နှိပ်ရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ face ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် ၂ အနေနဲ့ password/pin ကို ရိုက်ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ password က ဂဏန်းခြောက်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ password ကို ရိုက်ထည့်ရာမှာ အဓိကသတိပြုရမှာကတော့ ကိုယ်အမြဲတမ်းမှတ်မိနေမယ့် ဂဏန်းမျိုးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ password ရိုက်ထည့်ပြီးရင်တော့ unlock ကို နှိပ်ပြီး ဆက်သွားရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်မျက်နှာအနေအထားကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့မယ်။
အဆင့် ၃ အနေနဲ့ မျက်နှာကို မှတ်တမ်းတင်ရပါမယ်။ အရှေ့ကင်မရာကနေတစ်ဆင့် မျက်နှာကို မှတ်တမ်းတင်ရမှာပါ။ မျက်နှာကို မှတ်တမ်းတင်တဲ့အဆင့်က အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုကိုင်ထားပြီး ငြိမ်ငြိမ်နေရုံပါပဲ။ ကင်မရာက ၁၀၀% မှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားတဲ့ အထိစောင့်နေလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ quick recognition ကို သေချာ on ထားဖို့ပါပဲ။ အဆင့် ၄ အဖြစ် Smart motion ကို သွားရပါမယ်။ Smart turn on/off screen ကိုရောက်ရင် Raise to wake ကို activate လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါမှ ဖုန်းကို ကိုင်မြှောက်လိုက်တာနဲ့ lock ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်တွေ ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ စာဖတ်သူရဲ့ V7+ ကို ဖွင့်ရာမှာ ဘယ် key ကိုမှ နှိပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အရမ်းပဲ လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။
Face access ကို အသုံးပြုခြင်းက လွယ်ကူပါတယ်။ ပြီးတော့ သမားရိုးကျ ဖုန်းဖွင့်နည်းတွေမဟုတ်ဘဲ ဖုန်းကောက်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ ဖွင့်လို့ရတာကြောင့် ဆန်းသစ်တယ်လို့လည်း ပြောရပါမယ်။ သူ့ရဲ့ lock ဖွင့်နှုန်းက အရမ်းကို မြန်ဆန်ပါတယ်။ မျက်နှာက ကင်မရာနဲ့ တည့်တည့်ဖြစ်မနေဘဲ ခပ်စောင်းစောင်းဖြစ်နေရင်တောင် lock ပွင့်ပါတယ်။ Pattern တွေ၊ တခြား password နံပါတ်တွေကို အသုံးပြုစရာမလိုတဲ့အတွက် ဖုန်းဖွင့်ကာနီး စဉ်းစားနေစရာ မလိုတော့တာကလည်း အသုံးပြုသူတွေအတွက် တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေစေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။